Afaan barachuuf umurii murteessaan jira jedha qorannoon - BBC News Afaan Oromoo
Afaan haala gaariiin barachuudhaaf umurii murteessaa ta'e jiraachusaa qorannoo ifa taasisee.
Fakkeenyaaf afaan Ingliziitiin akka warra afaan itti hiikateetti baruu kan barbaaddan yoo ta'ee, umurii waggaa 10 duraatiin eegaluu barbaachisa jedha qorannichi.
Namoon hanga umurii waggaa 17 fi 18 ira caalaa ogummaa kan baratan ta'uun hafu.
Argannoon Barruu Cognition kunis erga namoota umurii fi lamiilee biyoota garaa garaa keessatti argaman kuma 670 ta'an irratti gaggeefamuun booda kan argameedha.
Qorannoon seer-luga kunis hirmaattoota baay'ee argachuuf jecha fuula feesbukii irratti maxxanfamee ture.
Gaaffileenis akka hirmaattoonni himicha afaan Ingliziitiin barreefamee murteessuu danda'a fakkeenyaa, Yahaannis kaleessa dorgommii mo'achuuf barbaadee ture ' kan jedhu serri lugaasaa sirri ta'usaa akka burteessu danda'an qoratameera.
Fayyadamtoonnis umuriifi yeroo ammamiitiif afaan Ingiliizii akka bartaniifi haala akkamii keeatti akka baratan gaafatamaniiru. Akkasumas gara biyyoota afaan Ingliffaa dubatanii yoo jiraatan illeen gaafatamaniiru.
Hirmaattoota keessaayis kanneen gara kuma 246 ta'anii biyyoota afaan Ingilizii itti dubbatamu keessatti guddatan, kanneen hafan ammoo kan akka afaan lammaffaatti dubatnaiidha.
Afaanoonni irra caalaan hirmaattoonni haasa'aniis (afaan Ingliiziin alatti) Finishi, Turkishi, Raashiyaa fi Haangaarii ture.
Namoonni qormaaticha xumura irra caalaan isaanii kanneen umuriin waggaa 20 fi 30 jidduutti argamaniidha. Umurii xiqqaan 10 yoo ta'u guddaan waggaa 70.
Qorrattoonni odeeffannicha wayita kompitaraan xinxalaniitti, ibsi irra gahame seera-lugaa barachuun daa'imummaatti olaanaadha kan jedhuudha. Umurii dargagummaatti gaarii ta'ulleen duluma keessa garuu gadii bu'aa adeema.
Afaan barachuun yeroo baayyee ijoollumaan baay'ee salphaa yoo ta'u, akkuma guddachaa adeemnuun caalaa cimaa adeema.
Haa ta'u malee namoonni booda keessa baratan ammoo oggeessa ta'u ni danda'u ammalleen, jedha qorannichi.
Haala baruu afaanii umurii waggaa 18 irratti maaltu akka gadii busuu garii wanti ifa ta'e hinjiru. Qorannichi tarii waan sammuun umurii sanatti jijjirama xiqqaa qabaatuufi cimaa adeemuuf jedha.
Kana jechuunis umurii dargaggummaatti afaan biraa baratamu hindanda'amu jechuus miti.
Afaan ofiitiin alatti kan biraa barachuun sammuu keessaniif gaarii ta'ufi akkasumas rakkina irranfachuu tursiisuuf akka gargaarulleen qorannoowwan ni mul'isu.
''Namoonni umurii 20 keessa afaan haarawaa barachuun qormaata sirriin darban jiru. Mudannoowwan lama, sadii ykn afurii kana fakkaatan jiru'' jedhu qorataan tokko.
Dr Daanijelaa Trenkii yunivarsitii York irraa qoranniichi gama seera-luga qofaan kan qorateedha jedhu. ''Kanaafuu yoo akka warra afaan ittiin hikkatanii ta'u baatteefi seer-luga kee hunda sirrii ta'u taattulleen hasa'aan gaarii ta'u malta ta'a,'' jedahniiru.